Inay Guul Darada U Qalmeen, In Koox Ahaan Aysan U Dheelin & Gennaro Gattuso Oo Canaantay Wiilashiisa %
Tababaraha kooxda kubada cagta AC Milan ee wadanka Talyaaniga ninka lagu magacaabo Gennaro Gattuso, ayaa wuxuu ka hadlay guul daradii kasoo gaartay dhigooda Arsenal, kulankii ka tirsanaa lugta koowaad ee wareega 16-ka Europa League.
Sikastaba, Gattuso oo ciyaarta kadib uwaramay war-fidiyeenka ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in kooxdiisa aysan ahayn mid koox ahaan udheeleysa, islamarkaana uu ka muuqday kala qob-qob-sanaa aad u weyn.
“Waan ogeen inaan usocono kulan aad u adag,” ayuu maclimuu Gattuso yiri kadib guul daradii gurigooda kusoo gaartay.
“Arsenal waxay ka yimaadeen xaalad adag, laakiin tayadooda ayay nagu soo bandhigeen, halka inaga aan ahayn kuwa qaladaad badan sameeyay.
“Uma aanan dheelin sida koox isku abaabulan, Arsenal guusha waa ay uqalantay,” ayuu hadalkiisa ku daray daafacii hore ee Talyaaniga
“Wax badan waan sameynay karnay, laakiin uma anaan ciyaarin si koox ahaan ah, marka waqti kasta in lagu soo weeraro waa mid halis ah.
“Inaan ku dheesho heerar-kaan oo kale, waqtiyo kala duwan, waxay ku siineysaa inaad lumiso Kalsoonidaada,” ayuu qirtay.
Wuxuu kusoo gaba gabeeyay hadalkiisa: “Waxaan ku jirnay maalin fasax ah, Arsenal, waa ay uqalantay guusha, wax badan ayaan ka baran doonaa Tani.
AC Milan vs ArsenalEuropa League
WARBIXIN: Labo Arrin Baa Sabab U Ah In Neymar Uu Ku Dhibtooda PSG & Xidigaha Barca Oo Ku Lug-yeeshay